मेयर अफिसमै सहयोगीबाट मसाज, भाइको पनि बाख्रा का,ण्ड, के रहेछ खासमा? – Dainik Sangalo
मेयर अफिसमै सहयोगीबाट मसाज, भाइको पनि बाख्रा का,ण्ड, के रहेछ खासमा?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: १३:५८:२६
अफिसमै सहयोगीबाट मसाज गराएका मेयरका भाइको पनि बाहिरियो बाख्रा का, xण्ड, के रहेछ खासमा?
काठमाडौ । धनुषाको बिदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले कार्यकक्षमै खुट्टा मसाज गराइरहेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । उनले कार्यालय सहयोगी करन दासबाट मसाज सेवा लिएका हुन् ।
तस्वीरमा मेयर दास आरामसँग सोफामा सुतेका छन् भने कार्यालय सहयोगीले खुट्टा थिचिरहेको देखिन्छ । मेयर दासले मालिस गराइरहेको फोटो कसैले खिचेर फेसबुकमा हालदिएपछि भाईरल भएको हो । दास माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मेयर हुन् ।
मेयर दासले आफूलाई सञ्चो नभएको पर्ने कार्यालय सहयोगीलाई मालिस गर्न लगाएको बताए । भाइरसको भ्याक्सिन लिएपछि आफू बिरामी बनेको उनको भनाइ छ । मेयर दासका अनुसार कार्यालय सहयोगी करन उनका काकाका छोरा हुन् । भाइले अरु काम नपाएको र विदेश जान पनि नसकेकाले आफूले नगरपालिकामा काम लगाइदिएको उनले बताए ।
मेयर दासको यो तस्बिर भाइरल हुने क्रम नरोकिदै उनका भाईको अर्को का, x ण्ड पनि भाइरल भएको छ । बेचन दासका भाइ लखन दासले बाख्रा वितरणको नाममा झण्डै पाँच लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको रहस्य खुलेको छ। नगरपालिकाका निमित प्रशासकीय अधिकृत संजिव साहको मिलेमतोमा लखनले १० वटा मात्रै बाख्रा वितरण गरी ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको खुलासा भएको हो।
लखनले विदेह नगरपालिका ७ स्थित भगवती बाख्रा पालन कृषि समूह जोगियाबाट एक सय वटा बाख्रा खरिद गरेको बिल नगरपालिकामा पेश गरी ४ लाख ७१ हजार भुक्तानी लिएको कार्यालय श्रोतले जनाएको छ। दासले ९।१० वटा मात्र बाख्रा वितरण गरी निमित प्रशासकीय अधिकृत साहसँग साँठगाँठ गरी एक सय वटाको प्रमाण बनाएर नगरपालिकाबाट सो रकम झिकेका हुन्।
वडा नं। ४ का वडाध्यक्ष विनोद गोहितमानले मेयरका भाइ लखन दासले बाख्रा वितरणको नाममा नक्कली बिल भर्पाइ बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। उनले बाख्रा वितरण अनियमिततामा निमित प्रशासकीय अधिकृत साह, मेयर दास र उनका भाइ लखनको संलग्नता रहेको दावी गरे।
Last Updated on: August 10th, 2021 at 1:58 pm